Dil markale ka dhacay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Dil markale ka dhacay Muqdisho
MUQDISHO (Keydmedia) - Kooxo hubeysan oo Afka soo duubtay ayaa waxa ay xalay ku dileen magaalada Muqdisho Qof rayid ahaa.
Goobjoogiyaal ayaa sheegaya in Wiil dhalinyaro aha lagu dilay Xafadda Black-Sea kadib markii Labo Nino o Bastoolado ku hubaysanaa oo anan la aqoon halka ay ka yimadeen ay Rasaas ku fureen Willka xilli uu kusii jeeday Gurigiisa oo ku yaalla Xaafaddaasi.
Lama oga illaa hadda Sababta ay Labadaasi Qof ay u dileen Wiilkaasi,hase haatee dad Xaafadda ayaa sheegaya in Wiilka uu kamid ahaa Dhlinyarada Xaafadda islmarkaana aysan garanayn Sababta loo dilay.
Kadib markii uu dilka uu dhacay ayaa waxaa goobta soo gaaaray Ciidamada dowlada KMG ee ku sugan Xaafadda Black-Sea ee Degmada Hodon, waxayna meel Banaan ah ay isagu keeneen dadkii ku ganacsanayay Xaafadda iyo dad Wadooyinka marayay kuwaasi oo baritaano ay sameeyen ka dib aysan jirin wax war ah oo ay ka soo saareen ama ay u qabteen dilka loo geestay Marxuumka.
Ciidamada dowlada KMG ayaa waxaa Caado u noqotay in marka uu Falka danbiyeed uu dhaco kadib inay goobta soo gaaran taasi oo keenta in ay soo qabqabtaan dad aaan lug ku laheyn Falka meesha ka dhacay, waxaana durbadiiba goobta ka baxsada Kooxihii falka geestay weliba si aan Cabsi ku jirin.